BBC Somali - Faaqidaad - Sawiro taariikhda koobka dunida
8 June, 2010, 20:22 GMT 23:22 SGA
Sawiro taariikhda koobka dunida
Taariikhda koobka dunida oo sawirro
Halkan ayaa dalalka Uruguay iyo Argentina ay ku soo jeedaan garoonka ay ciyaarta finalka ee ugu horeeyay kubadda cagta adduunka, oo ka dhacaya garoonka Centenario ee magaalada Montevideo.
Sawir gacmeed ciyaaraha dunida
Finalka daqiiqo ka mid ahaa, sida goolka uu ciyaaryahanka Ghighia uu dhaliyay, kaasoo kooxda Uruguay u keenay in ay qaadato title-keedii labaad kadib markii ay kaga badisay Brazil garoonka Maracanazo.
Sawiro ciyaaraha adduunka
Bobby Moore, wuxuu ahaa captain-ka kubadda cagta kooxda England, oo ahaa dalka alifay ciyaarta kubadda cagta, markii ugu horaysay ugu danbaysay ee ay ku guulaystaan tartanka
Sawirro ciyaaraha adduunka.
Pele iyo Jairzinho oo ku jira sawir muujinaya "O Rei" oo ku farxaya goolkiisa finalkii tartankii ka dhacay Mexico 1970-kii, koobkiisii sadexaad ee adduunka.
Sawiro ciyaaraha dunida
Xusuusta ugu horaysa ee aan ka haysto ciyaarihii kubadda cagta, waa in aan jarjari jiray cadad waraaqo ah si aan ugu soo dhoweeyo garoonka kooxd Argentina
Sawirro ciyaaraha dunid
Goolkii labaad ee Diego uu ka dhaliyo England, oo dad badan ay u arkaan in uu ahaa kii ugu wanaagsanaa taariikhda kubadda cagta caalamka.
Sawirro ciyaaraha adduunka
Zidane, wuxuu ahaa ciyaaryahan wayn. madaxaynta ayaa muujisay in uu bini'aadam yahay
Sawirada ciyaaraha dunida
Qaar ka mid ah cayaaryahanada ugu caansan koobka adduunka